ဘာဆာ ကို ငြင်းခဲ့တဲ့ ရူဒီဂါ ၊ ဇီဒန်း နည်းပြချင်တဲ့ အသင်း ၊ နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ ရိုင်ယန်ဂစ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ဘာဆာ ကို ငြင်းခဲ့တဲ့ ရူဒီဂါ ၊ ဇီဒန်း နည်းပြချင်တဲ့ အသင်း ၊ နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ ရိုင်ယန်ဂစ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ရီးရဲမက်ဒရစ် ဆီကို ချဲလ်ဆီး ကနေ အလွတ်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့ပြီး ကျောနံပါတ် ၂၂ ကို ဝတ်ဆင် ကစားသွားမယ့် ဂျာမန် ခံစစ်မှူး အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ က ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ သူ့ကို ဆက်သွယ်ခဲ့ ပေမယ့် သူကတော့ ရီးရဲမက်ဒရစ် တသင်းတည်း ကိုသာ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စိတ်ပိုင်း ဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘင်ဖီကာ အသင်းဟာ ရှက်တာ ဒိုးနက် ကို ပြောင်းရွှေ့ကစား နေတဲ့ အိုင်ယက်စ် တောင်ပံ ကစားသမားဟောင်း ဒေးဗစ် နီရက်စ် ကို ယူရို ၁၅ သန်း နဲ့ ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အီတလီ ဝါရင့် ဂိုးသမားကြီး ဘူဖွန် ဟာ စီးရီးအေ ကို ရောက်လာတော့မယ့် PSG အသင်းဖော်ဟောင်း ဒီမာရီယာ ကို ကြိုဆို လိုက်ပြီး ဒီမာရီယာ အီတလီ ကို ရောက်လာတာ ဟာ တချိန်တုန်းက မာရာဒိုနာ အီတလီ မြေကို ရောက်လာသလိုမျိုး တူညီတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာမယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ကွင်းလယ် ကို အားဖြည့်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ လီဗာပူး ဟာ PSG မှာ နေရာပျောက် နေတဲ့ အသင်းသားဟောင်း ဝိုင်နယ်ဒမ် ကို ပြန်ခေါ်မယ်လို့ သတင်းထွက် လာခဲ့ပေမယ့် နာမည်ကျော် ဂျာနယ်လစ် ဖာဘရီဇီယို ရိုမာနို ကတော့ ဒီသတင်းဟာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆို သွားခဲ့ပြီး လီဗာပူး ဟာ နာဘီကီတာ ကိုသာ စာချုပ်သက်တမ်း တိုးဖို့ကို ပိုမို ဦးစား ပေးဖွယ်ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြ သွားခဲ့ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် လူငယ် နောက်ခံလူ အိုမာ ရီကစ် ကတော့ ရော့တာဒမ် အသင်းဆီကို တနှစ် အငှား စာချုပ် နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိ သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အာရွန်ဝမ် ဘစ်ဆာကာ နဲ့ ဘရန်ဒွန် ဝီလ်ယံ တို့ ၂ ဦး ကို နည်းပြ အဲရစ် တန်ဟတ် က အသင်းပြောင်းလိုက ပြောင်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးထား တယ်လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
နည်းပြ လောက ထဲကို ပြန်လည် ဝင်ရောက်ဖို့ စိတ်ဆန္ဒ ပြင်းပြ နေတဲ့ ဇီနဒင် ဇီဒန်း ဟာ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အသင်းကို တာဝန်ယူ ကိုင်တွယ် လိုတာကြောင့် PSG ကို ငြင်းပယ် ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာ ပါတယ် ။
ဇီဒန်း ဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား အပြီးမှာ လက်ရွေးစင် နည်းပြ ရာထူးကနေ ထွက်ခွာမယ့် ဒီဒီယာ ဒက်ချမ့် ရဲ့ နေရာကို ရယူသွားဖို့ စောင့်ဆိုင်း နေတာလို့ သိရပါတယ် ။
PSG ဟာ အင်တာ မီလန် နောက်ခံလူ မီလန် စကရီနီယာ အတွက် နောက်တကြိမ် ကြိုးစားမှု အဖြစ် ယူရို သန်း ၆၀ + အပိုဆုကြေးနဲ့ စီးရီးအေ ကလပ်ဆီ ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ရိုးမား အသင်း ကတော့ လိုင်လီ နောက်ခံလူ ဇီကီ ဆီလစ် ကို ခေါ်ယူမှု ပြီးမြောက်ဖို့ အတွက် ကြိုးစား လုပ်ဆောင် နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
လီဗာပူး အသင်းဆီကို ၂၀၁၅ ကတည်းက ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့ပြီး ပွဲကစားခွင့် မရယူနိုင်ဘဲ အငှားတွေ ဆက်တိုက် ထွက် ကစားနေရတဲ့ တိုင်ဝူး အဝန်နီယီ ဟာ နော်တင်ဟမ် ဖောရက်စ် အသင်းဆီကို ပြောင်းရွှေ့ သွားဖို့ နီးကပ် နေပြီလို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အမှုရင်ဆိုင် နေရတဲ့ ရိုင်ယန်ဂစ် ကတော့ ဝေးလ် လက်ရွေးစင် နည်းပြ ရာထူး ကနေ နှုတ်ထွက် သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် ဝုဗ် အသင်းဟာ ရေးဗား ပလိတ် မှာ ကစားနေတဲ့ ၂၁ နှစ် အရွယ် အာဂျင်တီးနား ကွင်းလယ် ကစားသမားလေး အန်ဇို ဖာနန်ဒက်စ် ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ် လို့ သိရပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ နဲ့ ကင်မရွန်း တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဆင်မြူရယ် အီတူး ဟာ စပိန်မြေမှာ ကစားခဲ့စဉ်က အခွန်ရှောင်လွှဲမှုကြောင့် ဆိုင်းငံ့ ထောင်ဒဏ် ၂၂ လ ကျခံဖို့ အမိန့် ချမှတ် ခံခဲ့ရပြီး များပြားတဲ့ ဒဏ်ငွေ ကိုလည်း ပေးဆောင် ရမယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ဝန်ထမ်း တယောက် ဟာ ရိုနယ်ဒို ရဲ့ တန်ဖိုးကြီး ကား တစီး ဖြစ်တဲ့ Bugatti Veyron ကို မောင်းနှင်ရင်း အိမ်တလုံးကို ဝင်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ် လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . . . ။
Previous Article ရာဖင်ညာ ရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ ၊ အသင်း ၄ သင်းရဲ့ ပတ်လည်ဇာတ်လမ်း ၊ လီဝန် ကို ကမ်းလှမ်းတော့မယ့် ဘာဆာ တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းများ
Next Article PSG နည်းပြသစ် ဖြစ်လာဖို့ လက်တစ်ကမ်း အလိုကို ရောက်ရှိလာတဲ့ Christophe Galtier